मेयर शाक्य भन्नुहुन्छ– ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाले काम गर्दा मात्रै किन विरोध हुन्छ ?’ – Maitri News
मेयर शाक्य भन्नुहुन्छ– ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाले काम गर्दा मात्रै किन विरोध हुन्छ ?’
Mohan Bastola April 26, 2019
आज काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको संयुक्त आयोजनामा यहाँ कार्यक्रम भैरहेको छ । अघि भर्खरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले त्रिपुरेश्वरस्थित त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरको अवलोकन गर्नुभयो । अहिले हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र परिसरको पनि अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
विशेष गरिकन तीन ओटा निकाय काठमाडौँ महानगरपालिका, राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभाग पुर्ननिर्माणसँग सम्वन्धित निकायहरु हुन् । त्यसमा पनि विशेष गरिकन सम्पदा क्षेत्र र सरकारी निकायहरु पुर्ननिर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागको छ भने निजी घरहरु र सम्पदालाई पनि विशेष गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका, पुर्ननिर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागले पुर्ननिर्माणमा तिव्रता दिइरहेको अवस्था छ । अहिले हनुमानढोका दरवार क्षेत्रलाई मात्रै हेर्ने हो भने कहिँ पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले कहि पुरातत्व विभागले र कहिँ काठमाडौँ महनगरपालिकाले पुर्ननिर्माण गरिरहेको छ । यी तीन ओटा निकायका बीचमा समन्वय हुन सक्यो भने समयमै हामी सबै काम गर्न सक्छौँ । कहिले काँहि हामी बीचमा पनि अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा जस्तो जस कसले लिने भनेर एक आपसमा हिलो छ्यापाछ्यापले गर्दा पुर्ननिर्माणमा केही ढिलाई पनि भैरहेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूले जिम्मेवारी पाएको सहकार्य गरेर समन्वयमा धेरै काम अघि बढाएको छ । अहिले विशेष गरेर धेरैको चासो रहेको काष्ठमाण्डप पुर्ननिर्माण सुरु भैसकेको छ । त्यहाँ पनि धेरै विवाद, धेरै अन्योल, धेरै अस्पष्टता र सरकारी निकायहरुको पनि बुझाइमा देखिएको फरकपनाले पनि काममा ढिलाई हुन पुग्यो । अन्त्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा स्थानीय जनताको जनसहभागितामा अघि बढि सकेको छ । त्यसको अवलोकन तपाईँहरुले गर्न सक्नुहुने छ । त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले साना–ठूला पुर्ननिर्माणका कामलाई अघि बढाएको छ । अहिले हामीले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्ने भनेको सम्पदा क्षेत्र पुर्ननिर्माणमा हो भने अर्कोतिर निजी घरहरु पुर्ननिर्माण गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्य छ ।
काठमाडौँका भित्रि शहरहरुमा सम्पदा पुर्ननिर्माणका कामहरु त राज्य विभिन्न निकायको सहयोगमा भै रहेका छन् । तर, मुख्य गरेर निजी घरहरु पुर्ननिर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । शहर भित्रका चोक भित्रका, गल्ली भित्रका घरहरुलाई पनि एउटै नीति भित्र राख्न खोज्दा पुर्ननिर्माणमा अलिक ढिला हुन गएको छ । अहिले पनि त्यहाँ धेरै टेको लगाएका घरहरु छन् । बस्न अयोग्य घरहरु छन् । राज्यले घोषणा गरेको तीन लाख लिन नसकेको र सहुलियततर्फ दिएको रकम समेत लिन नसकेर पुर्ननिर्माण गर्न नसकेका पनि धेरै घरहरु छन् ।
काठमाडौँका भित्रि शहरहरुमा सम्पदा पुर्ननिर्माणका कामहरु त राज्य विभिन्न निकायको सहयोगमा भै रहेका छन् । तर, मुख्य गरेर निजी घरहरु पुर्ननिर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । शहर भित्रका चोक भित्रका, गल्ली भित्रका घरहरुलाई पनि एउटै नीति भित्र राख्न खोज्दा पुर्ननिर्माणमा अलिक ढिला हुन गएको छ । अहिले पनि त्यहाँ धेरै टेको लगाएका घरहरु छन् । बस्न अयोग्य घरहरु छन् । राज्यले घोषणा गरेको तीन लाख लिन नसकेको र सहुलियततर्फ दिएको रकम समेत लिन नसकेर पुर्ननिर्माण गर्न नसकेका पनि धेरै घरहरु छन् । त्यसमा हामीले पुर्ननिर्माणसँग सल्लाह गरिरहेका छौँ । बैङ्कहरुले सहज ढंगले ‘लोन’ प्रवाह गर्ने हो भने पुर्ननिर्माण हामीले तोकेको समयमा गर्न सक्छौँ होइन भने लामो सयमसम्म पनि भूकम्पको पीडाबाट गुज्रिनु पर्ने अवस्था हुन्छ । यसमा नीति–निर्माण तहबाट ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । म सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । काठमाडौँ महानगरपालिका मिलेर काम गर्न चाहन्छ । तर, साझा राजनीतिक नेतृत्व भएका कारणले पनि होला । जसले कस्ले लिने, यसलाई सफल बनाउने कि असफल बनाउने भन्ने खेल पनि केही समस्या भएको छ । महानगरपालिकाले गरेका काममा महानगरपालिकालाई असफल बनाउने काम पनि भएका छन् । पुर्ननिर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागले हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन । राम्रा काममा समन्वय गरेर अघि बढ्ने हो । रानीपोखरी पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले अहिले जसरी बनाउँदै गरेको छ हामीले पहिला त्यसरी नै बनाउन खोजेका थियौँ । हिजो त्यहाँ डोजर चल्दा ठूलाठुला कुरा गर्नेहरु अहिले त्यहाँ डोजर चल्दा कोही पनि बोल्दैन । गाह्रो त्यहाँ छ, विश्लेषण गर्ने कि नगर्ने ? काठमाडौँ महानगरपालिकाले काम गर्दा मात्रै किन विरोध हुन्छ ? आन्दोलन हुन्छ ? नारावाजी हुन्छ ?
काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको मेयरको मात्र होइन । हामी सबैको हो । पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु पनि त्यसमा गाँसिनु भएको छ । त्यसकारण सबैले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ । महानगर असफल पार्ने, महानगरलाई असहयोग नै गर्ने नियत राखेर हामीले काम गर्ने हो भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ । अहिले हामीले धेरै ठाउँमा साना काम त गरिहेका छौँ । धेरै चासो रहेका धरहरा पुर्ननिर्माणको काम सुरु भैसकेको छ । काष्ठमाण्डप सुरु भैसकेको छ । माजु देवः पुर्ननिर्माणको काम अघि बढाएका छौँ । आगंक्षेँ पुर्ननिर्माणसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी रानीपोखरी पुर्ननिर्माण भैरहेको छ । एउटा दुःखको कुरा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामीले धेरै सम्पदा पुर्ननिर्माण गरेका छौँ । हामी सबैले काठमाडौँ महानगरपालिका भवनको पुर्ननिर्माण गर्ने भनेर सामूहिक रुपमा घोषणा गरेका छौँ । अरु सबै भवन बन्ने तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन पुर्ननिर्माण गर्ने भन्दा भित्रबाट नै चिठ दिएर उजुरी हाल्न लगाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सबै भवन बन्ने, दरबार हाइस्कुल बन्ने, वीर अस्पताल बन्ने, नेपाली सेनाको भवन बन्ने । तर, जनताको काम गर्ने जनताको अड्डा चाँहि बन्न नदिने । त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण हुने कि नहुने ? विद्यासुन्दर शाक्य अब तीन वर्ष रहन्छ । तर, चालिस लाख महानगरवासीले सेवा लिने ठाँउ बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो भवन बनाउन नदिने हो भने, दुई–चार जनाको रहरवाजीमा राज्यलाई दुःख दिने हो भने राज्य कता छ भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको मेयरको मात्र होइन । हामी सबैको हो । पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु पनि त्यसमा गाँसिनु भएको छ । त्यसकारण सबैले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ । महानगर असफल पार्ने, महानगरलाई असहयोग नै गर्ने नियत राखेर हामीले काम गर्ने हो भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ । अहिले हामीले धेरै ठाउँमा साना काम त गरिहेका छौँ । धेरै चासो रहेका धरहरा पुर्ननिर्माणको काम सुरु भैसकेको छ । काष्ठमाण्डप सुरु भैसकेको छ । माजु देवः पुर्ननिर्माणको काम अघि बढाएका छौँ ।
म तपाईँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । धेरै काम हामीले पहिला नै पुर्ननिर्माण भैरहेका कामलाई निरन्तरता दिदैँ आएका छौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु भन्दा अघि सुरु भएका कामलाई पनि हामीले निरन्तरता दिएका छौँ । त्यहाँ पनि विरोध गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई असफल बनाउने काम भैरहेको छ । प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ तर त्यसको नाममा असहयोग गर्ने हो भने त्यो राम्रो होइन । काठमाडौँ महानगरपालिका पुर्ननिर्माणको काममा तिव्रताका साथ लागिरहेको छ । हामी पुर्ननिर्माण गरेर हामी देखाउँछौँ । हामीले बु्रमर लिएर धुलो नियन्त्रण गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको टिम काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माण गरेर जनतालाई सेवा दिन तयार छौँ । काठमाडौँ महानगरका ३२ वटै वटाका भवनहरु हामी निर्माण गरिहेका छौँ । तर, केन्द्रीय भवनमा अहिले पनि उजुरी हालेका छन् । म तपाईँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । धेरै काम हामीले पहिला नै पुर्ननिर्माण भैरहेका कामलाई निरन्तरता दिदैँ आएका छौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु भन्दा अघि सुरु भएका कामलाई पनि हामीले निरन्तरता दिएका छौँ । त्यहाँ पनि विरोध गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई असफल बनाउने काम भैरहेको छ । प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ तर त्यसको नाममा असहयोग गर्ने हो भने त्यो राम्रो होइन । काठमाडौँ महानगरपालिका पुर्ननिर्माणको काममा तिव्रताका साथ लागिरहेको छ । हामी पुर्ननिर्माण गरेर हामी देखाउँछौँ । हामीले बु्रमर लिएर धुलो नियन्त्रण गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ । तर, धरहरा, दरबार हाइस्कुल, वीर अस्पताल, रत्नपार्कमा बन्दै गरेका संरचनाका कारण धुलो आइरहेको छ । हामी पूरै धुलो नियन्त्रण त गर्न नसकैला तर कम गर्ने उपायहरु खोजिरहेका छौँ । अहिले पनि केहीले मेयरले रातीराती बु्रमर चलायो हामीले देख्दै देखनौँ भनेर गालि गरिरहेका छन् । दिउँसो चलायो भने मेयरले दिउँसै ब््रमर कुदाएर ट्राफिक जाम गरायो भनेर गालि गर्छन् । यद्यपि हामी कसैलाई असर नगर्ने गरी हामीले बु्रमर चलाउन खोजिरहेका छौँ । हामी पुर्ननिर्माण र काठमाडौँ निर्माणलाई पनि सँगसँगै लैजाने गरी अघि बढिरहेका छौँ ।
(२०७२ गोरखा भूकम्पको चौथो स्मृतिसभामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मयेर विद्यासुन्दर शाक्यले गरेको सम्वोधन)
Previous Previous post: गौरिका सिंहः न लक्ष्यबारे चिन्ता न प्रतिद्वन्द्वीको डर
Next Next post: अरु देशको अर्थतन्त्र बिगारेर आफ्नोमात्रै सपार्दैनौं : चिनियाँ राष्ट्रपति